Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ungayikhetha Kanjani Ompompi Abalungile Besizinda Sakho
2020 / 11 / 16 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4951 0
Umpompi ophansi ongaphansi kungenzeka ukuthi wasusa isaziso sakho ezigxotsheni zokuklama, kepha njengoba igumbi lokugezela liyingxenye eyodwa yendlu yakho oyisebenzisa nsuku zonke, kubalulekile ukuthatha isikhathi sakho nomzamo wakho ukuthola ukuthi iziphi ezizoqhubeka zisebenze ngempumelelo kakhulu ngomklamo wakho wangaphakathi nendlela yokuphila. Noma ngabe uvuselela yonke indlu yokugezela noma uvuselela isikimu esivele sikhona, ompompi obakhethele umcengezi wakho bangenza umehluko ophawulekayo emphumeleni owenziwe. Tshala imali ngokuhlakanipha, futhi kufanele bahlale kahle isikhathi eside esizayo. Lapha, ochwepheshe abathathu bakhombisa amathiphu abo aphezulu wokuthi ungasiza kanjani ekwenzeni ukukhetha okulungile.
Yazi ifayili lakho le- ompompi bokuxuba abathengiswa ku-inthanethi
1 Insika ompompi
Imvamisa ngaphakathi kwezindlu zangasese zesitayela sendabuko, ompompi bensika beza ngababili futhi baqukethe ukuthinta okukodwa kwamanzi apholile nokunye okushisayo. Isetshenziswa ukujikeleza ukubhekana noma ukugwedla, ompompi bensika badinga izimbobo ezimbili zompompi emgodini.
2 ompompi beMonobloc
Ifanele imicengezi enegebe elilodwa lokuthinta, ukuthinta kwe-monobloc kufaka ispout esisodwa esinikeza ukuhlangana kwamanzi ashisayo nabandayo. Njengoba ukwazi ukubona lapha, ukulawulwa kwamanzi kwakhelwe emzimbeni wakho wokuthinta, kukhiqiza isisombululo esihlakaniphile, esigcina isikhala. Uma ufuna ukugcina umcengezi wakho ucace bha, ungabeka emphemeni wakho wokufaka empompini yakho ye-monobloc.
Ngokufana nompompi be-monobloc, ompompi bokuxuba baletha inhlanganisela yamanzi ashisayo nabandayo ngesiphungumuntu ngasinye. Ngokungafani nompompi be-monobloc, noma kunjalo, abaxube bahlukanise izilungiselelo zamanzi. Abanikazi bendawo yokugezela bakhetha ipayipi lokuxuba elinemingxuma emithathu, eliqukethe izibambo ezihlukene zamanzi ashisayo nabandayo. Ngenye indlela, hlola uzungeze umpompi womshini wokuxuba onemigodi emibili, olawulwa yisilawuli esisodwa.
Cishe kunoma ikuphi ukulungiswa kwendlu yangasese, ompompi bangamagugu omqhele. Kutholakala ngezibalo eziningi ezibabazekayo nokuqedwayo, ngisho ompompi ababiza kakhulu baveza imihlaba yamathuba. Ngeza kokukhethwa kukho kokusebenzisana nokugcinwa kwamanzi okujwayelekile, futhi ompompi banamuhla bokugezela banikeza abaninikhaya konke okulula.
Ngaphambi kokukhetha ompompi basendlini yokugezela, kuzofanele ubheke izinto ezimbalwa, njengokuthi usebenzisa usinki osuvele ukhona noma uthenga entsha, kuzoba kuphi ukuvulwa kompompi. Ungadinga futhi ukubheka ukuthi iziphi izici ozifunayo, nokuthi ungakanani umpompi ovumela imali yakho. Okunye ukucatshangelwa ngosayizi wamakamelo akho okugeza nokuthi hlobo luni ompompi luvame ukuba semakhaya afanayo endaweni yangakini.
Uma ufaka kabusha ipayipi elisha kusinki osuvele ukhona noma uthenga i-sink ensemble ephelele, qiniseka ukufanisa uhlobo lwompompi nokuvuleka kwegebe kusinki yakho.
Oompompi abanemigodi eyodwa bafaka ispout nezibambo zokuxuba - imvamisa kuyisibambo esisodwa-kumkhiqizo owodwa odinga igebe lokucwila eli-1 kuphela. Ngokutholwa kabusha, amanye amamodeli afaka ipuleti lengxenye engezansi elimboza ukuvuleka okukhona okumbobo ezintathu. Ompompi bomgodi owodwa balungele osinki abancane, njengamakamelo okugeza egumbi lempuphu. Ubulula babo bubonisa imizwa yanamuhla.
Oompompi abasethwe phakathi nendawo balingana nosinki abajwayelekile abanemigodi emithathu (enezimbobo zangaphandle ezibiwe zihlukaniswe ngamasentimitha amane). Zizoba ne-lever eyodwa noma izibambo ezimbili ezibekwe kupuleti le-4-intshi. Zifanele amasinki amaningi okugezela.
Ama-mounts asakazekile anezinto ezintathu ezihlukene: Izibambo ezimbili nespout. Ibanga elijwayelekile phakathi kwezibambo lifinyelela okungenani amasentimitha ayi-8, futhi izingxenye ezintathu zinokuthambekela kokukhudlwana kunezinye izinhlobo zombhobho ompompi. Izinhlobo ezincane, ezibizwa ngokuthi ama-minispreads, zenzelwe izimbobo ezijwayelekile ezibhidlizwe ngamasentimitha ama-4 zihlukanisiwe.
Oompompi bamasango odonga baye bathola ukuthandwa kanye nosinki abazimele noma bohlobo lomkhumbi abafuna izigaxa ezinde ezedlula okungaphezulu kakhulu kwesitsha.
Ungacabangi ukuthi yonke into yombhobho ingafakwa kusigaba kalula. I-Kohler, isibonelo, yenza ipompo elihlanganiswe nekhabhinethi lesakhiwo sodonga. Noma yini oyibonayo iyisilawuli esincane sokulawula ukunyakaza esibheke phansi kusukela phansi kwesibuko sakho esifakiwe.
Izindaba ezimnandi: Ngaphakathi kwentshiseko yabo yokuletha imikhiqizo emisha emakethe, abakhiqizi bezinto zokulungisa izinto badale izinketho eziningi zokuqeda ukwedlula izingubo zikaSweetheart Gaga. Ngenxa yezigqoko zesimanje zokuvikela izicathulo ezigqamile, ngisho nompompi abangabizi kakhulu bangaziqhayisa ngeziqinisekiso zokuphila kwabo ngokuphela kwabo.
Izindaba ezimbi: Kuzofanele ukhethe kusuka ku-cornucopia ekhanda ingqondo yamathuba afaka phakathi i-chrome epholishiwe (i-stalwart embonini emile isikhathi eside), i-chrome ebhulashiwe, i-nickel epholishiwe, i-nickel ebhulashiwe, i-nickel enesando, insimbi engagqwali, ithusi, ibhulonzi lethusi , ithusi eligcotshwe uwoyela, ithusi eliphucuziwe, i-ceramic emnyama, emhlophe nokuhlobisa.
Masingasinaki isiliva, namuhla elingathathwa njengokutshalwa kwezimali nokukhethwa kokuhlobisa.
Uma izinketho zikunikeza ukulayishwa ngokweqile, zama lezi zeluleko zokwenza izinqumo:
Khohlwa ukwaziswa bese ugxila ekubukekeni. Iya egumbini lokubonisa lapho kuboniswa khona konke ukuqeda, bese ukhetha okuyinhloko oyithemu oyithandayo.
Ukudidiyela konke okuqedile endaweni yokugezela ngayinye okusho ukuthi izindawo zakho eziqinile-kufaka phakathi imigoqo yethawula, izinto zokukhanyisa kanye nezinsimbi zomnyango-zinokuphela okufanayo.
Ukuqedwa okupholishiwe kunambitheka kepha kudinga ukugcinwa njalo ukuze kugcinwe kubukeka kahle
Ukuqedwa kwe-Brushed kungcono ekufihleni izindawo zamanzi neminwe yeminwe, okuyinto enhle kakhulu uma unezingane
Ukulungiselelwa izindlu zangasese: OKUFANELE UKWAZI
Izinketho zepayipi lokugeza
Izinketho zeSinking Sink
Izinto Zokucwilisa Izitayela Nezitayela
I-Granite Bathroom iyazika
Oompompi Bendawo Yokugeza Abakudala
Yehlisa Izindlu Zokugeza
Imibono yokukhanyisa izindlu zangasese
Akumangalisi ukuthi iningi lokugxila kokuklama likwi-spout, futhi izingeniso zakamuva zifaka ama-spout aletha amanzi ajwayelekile ngamapayipi amancane, phansi ngama-chutes avulekile nangama-roller coaster curves. Abompompi bezingalo eziqondisayo basukile ekhishini lakho baya endlini yangasese, mhlawumbe okusho ukuthi awudingi ukuhambisa ibhulashi lakho lamazinyo emfuleni.
Edlule :: UMHLAHLANDLELA WOKUTHENGA KAKHULU WABAKHULU Olandelayo: UNGAYIKHETHA KANJANI INDLELA YOKUNGCWELE YOKUNGCOLA
2020 / 12 / 21 5992
2020 / 11 / 19 4682